फिल्म निर्माणको संख्यालाई हेर्दा दुइटा समयमा यो ग्राफ ह्वात्तै बढेको देखिन्छ । एउटा २०५५ देखि २०५८ सम्म र अर्को २०७४/७५ तिर । पछिल्लो समय त वर्षमै एक सयभन्दा बढी नेपाली भाषाका फिल्म निर्माण हुन थालेका थिए । नेपालमा बोलिने नेपाली बाहेकका भाषामा पनि फिल्म बन्ने क्रम बढिरहेको थियो । दुई वर्षमा सरकारले एउटा फिल्म बनाउने अवस्थाबाट वर्षको सयवटा फिल्ममा पुग्नुलाई लगानी र बजार विस्तारका हिसाबले राम्रो मान्न सकिन्छ । वर्षमा सयवटा फिल्म बनाउने उद्योग संसारमा धेरै छैनन् । तर, फिल्मको संख्याअनुसार यिनको व्यापार व्यवसाय भने सन्तोषजनक थिएन/छैन । जम्मा १० प्रतिशतजति फिल्मले मात्रै लगानी सुरक्षित गर्ने भएकाले यो लगानी प्राय: घाटाको लगानी हो । धेरैजसो लगानीकर्ताहरू दोहोर्‍याएर फिल्ममा लगानी गर्दैनन् । एउटा फिल्ममा लगानी गर्नेले त्यसबाट घाटा हुनासाथ यो व्यवसाय छोड्ने गरेको पाइएको छ । यसको अर्थ यो व्यवसाय नभइकन सोखको लगानीकै रूपमा छ ।
यो तीन दशकमा फिल्ममा लगानी गर्नेको संख्या बढ्यो, यसैले फिल्मको संख्या पनि बढ्यो । कलाकार, प्राविधिक र निर्माताको संख्या पनि बढयो । तर, धेरैजसो निर्माताहरू फिल्मलाई दीर्घकालीन व्यवसाय ठानेर, व्यापारको योजनासहित मैदानमा उत्रिएका देखिएनन् । यसैले एउटै हिउँदमा यिनको जाडो गयो †
राजेश हमालदेखि दयाहाङ राईसम्म दुई पुस्तामा धेरै कलाकारहरू रजतपटमा उदाए । यिनले धेरैलाई प्रेरित पनि गरे । पर्दामा केही स्मरणीय चरित्रहरू बाँचे पनि । कलाकारको प्रतिभालाई सिनेमामा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा मुख्यत: निर्देशकमा भर पर्छ । कलाकारहरूको पारिश्रमिक र प्रसिद्धीमा वृद्धि भई नै रहेको छ । ३० हजार सिनेमा हल भएको चीन वा ९ हजार भएको भारतको तुलनामा जम्माजम्मी २ सय ५० वटाजति सिनेमा हल भएको नेपालले व्यवसायको गफ दिने धेरै सुहाउने कुरा त होइन । तैपनि, डिजिटल, डायस्पोरा र बक्स अफिससमेत गर्दा हिट फिल्मले पैसा कमाउन सक्ने वातावरण भने बनेको भन्न सकिन्छ ।
जसरी नेपालमा माक्र्सवाददेखि गान्धीवादसम्मका विचार विदेशबाट आए, त्यसैगरी सिनेमा पनि विदेशबाटै आयो । न यसको प्रादुर्भाव यहाँ भयो, न यसको विकासक्रममा हाम्रो कुनै ठोस योगदान रह्यो । विश्व सिनेमालाई नेपालले अहिलेसम्म न कुनै शैलीगत विशिष्टतताले आकर्षित गर्न सकेको छ न कुनै विषयद्वारा आश्चर्यचकित पार्न सकेको छ । बरु, नेपालको भौगोलिक विकटता र जीवनको दुरुहताद्वारा आकर्षित भएर केही विदेशी फिल्ममेकरले बनाएका फिल्मले संसारमा चिनाउने काम गरेका छन् । चाहे त्यो ‘क्याराभान’ होस् वा ‘एभरेस्ट’ ।
‘एक नम्बरको पाखे’ र ‘साथी’ हुन् वा ‘मोहिनी’ र ‘करोडपति’ नेपाली फिल्मको मूलबाटोले समाजको संरचना, विचार र राजनीतिलाई खासै छोएनन् । यी कथा व्यक्तिका त रहे तर यिनले वर्ग वा समाजलाई छोएनन् । न त यी कथाको अभिव्यक्तिमा सर्जकको वैयक्तिक छाप देखियो । यिनले व्यक्तिका इच्छा, आकांक्षा र भावनाका कुरा गरे, समग्रमा एउटा समय वा समाजको भावनाको कुरा गरेनन् । यसैले यिनको महत्व ‘हिट’ हुनुमा सीमित रह्यो । यिनले न दृश्य भाषामा नयाँ प्रयोग गरे, न विषयलाई मिहिन ढंगले केलाउने कोसिस गरे । समग्रमा यिनले ‘मनोरञ्जन’ प्रदान गरे । यस्ता फिल्मको एउटै महत्व के रह्यो भने यिनले सधंै हिन्दी फिल्म हाउसफुल हुने हलमा नेपाली भाषाका फिल्म ल्याए ।
राजधानीमै भएको एउटा घटनामाथि छिरिङरितार शेर्पाले बनाएको ‘मुकुन्डो’ले मानवीय भावना, प्रेम, इष्र्या र द्वेषलाई यति जीवन्त तरिकाले फिल्ममा ल्यायो कि झाँक्रीको त्यो चरित्र दर्शकको मानसपटलमा टाँसिन पुग्यो ।
कुनै कुरा, घटना वा विचारलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने भन्नेले चेतना र सौन्दर्य दृष्टिको निर्माण गर्छ । यसबाट नै सम्बन्धहरूको परिभाषा बन्छन्, चरित्रहरूको चित्रण हुन्छ । उदाहरणका लागि प्रेमको परिभाषामा आएको व्यापकतालाई लिन सकिन्छ । अहिले जसरी समाजमा समलैंगिक सम्बन्धले वैधता पाएको छ, यो प्रेमको परिभाषामा आएको व्यापकताको उपज हो । तर, यही समयमा, यही समाजमा यस्ता क्षेत्र पनि जहाँ छन्, जहाँ अझै पनि प्रेम सम्बन्धलाई अनैतिक मानिन्छ † यो अन्तर किन छ त ?
एक समय पञ्चायती सरकारले आफ्नो प्रचार गर्न र व्यवस्थाप्रति मानिसमा आस्था पैदा गराउनका लागि सिनेमालाई प्रयोग गर्‍यो । सरकारी लगानीमा बनेका सुरुका फिल्मको मुख्य उद्देश्य त्यही थियो । ‘आमा’, ‘हिजो आज भोलि’ र ‘परिवर्तन’मा यो कुरा खुलेर गरिएको थियो, त्यसपछिका फिल्ममा थोरै लुकाएर/घुमाएर भनिएको थियो । जब सरकारको प्रचार संयन्त्रका रूपबाट फिल्मले मुक्ति पायो, यसले ती विषयलाई नै नजरअन्दाज गर्न थाल्यो । भारी बिसाएको भरियाले भारी नै छोडेर हिँडेजस्तो !
साइमिन लियाङले ‘रिजी’मा झन्डै ५ देखि ७ मिनेट लामा ‘स्टिल सट’हरू प्रयोग गरेका छन्, जसमा न त क्यामेरा चल्छ, न दृश्यमा देखिने चिज । यी लामा दृश्यहरूमा न कुनै संवाद छन्, न कुनै पाश्र्व संगीत । सामान्यतया: हामीले व्यवसायिक भन्ने फिल्महरूमा यस्ता प्रयोग संभव देखिँदैन । तर, सबै अरूले गरेकै काम मात्रे गरेर व्यापार चम्केला, कला त त्यस्तै हो !
दृश्य भाषा र शैलीको कुरा सर्जकको आफ्नो वैयक्तिकताको कुरा हो । फिल्ममेकर कतिसम्म मौलिक वा व्यक्तिगत हुनसक्छ भन्ने कुराले उसको सिर्जनशीलता दर्शाउँछ भनेर धेरै कलाकार र समीक्षकहरूले भनेका छन् । कथाको छनोटमा पनि यो कुरा लागु हुनसक्छ । भावना सार्वभौम हुन्छ, कथा र त्यसलाई भन्ने शैली मौलिक हुन्छ । यसैले कुनै कलालाई एकअर्काबाट फरक बनाउने हो । अन्यथा पृथ्वी एउटै हो, जातिका रूपमा मानिस एउटै हो । भूगोल, संस्कृति र अर्को मानिससँग उसको सम्बन्ध र संघर्षले न मानिसलाई फरक बनाइदिने हो † त्यसैले कथा र आख्यानको निर्माण गरिदिने हो । यसबाटै निचोरिएर त कलाको निर्माण हुन्छ ।
सिनेमा हल बन्द हुँदा, धेरै दर्शकसम्म पुग्नलाई अन्य माध्यम पनि रहेछन् भन्ने थाहा भएको छ । ती सबै प्लेटफर्मलाई प्रयोग गर्ने गरी काम गर्ने अवसर पनि आएको छ । ‘पर्सनल इज पोलिटिकल’ भन्ने गरिन्छ । अहिलेको परिभाषामा राजनीतिक हुनलाई समूह, जाति वा देशको कुरा गर्नु पर्दैन । कलाले त पहिले नै वैयक्तिकतालाई सबभन्दा बढी मौलिक भनिसकेको छ । खरबारीमा डढेलो लागेपछि नयाँ खर पलाएजस्तो यो महामारीले नयाँ सोच र शैलीको विकास गर्न फिल्ममेकरहरूलाई प्रेरित गरोस् ।